Hutano, 07 Gunyana 2017
China 7 Gunyana 2017
Ndira Kukadzi Kurume Kubvumbi Chivabvu Chikumi Chikunguru Nyamavhuvhu Gunyana Gumiguru Mbudzi Zvita
Gunyana 07, 2017
Zvizvarwa zveZmbabwe kuFlorida neMamwe Matunhu muAmerica Zvosangana neDambudziko reDutumupengo Irma
Apo dutumupengo rinonzi Hurricane Harvey risati ranyatsopera muAmerica, rimwe dutumupengo rinonzi Hurricane Irma rinonzi riri kuvhuvhuta zvine simba rakananga kudunhu reFlorida.
Gunyana 05, 2017
Vanhu Vanobva kuZimbabwe Vanopona Mudutumupengo reHurricane Harvey kuTexas
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muHuston kuTexas uko kwakarohwa nedutumupengo rine mafashamu, Hurricane Harvey, zvinoti kunyange hazvo vamwe vavo vakakuvadzirwa dzimba dzavo, vanotenda Nyadenga kuti hapana kana munhu mumwe chete pakati pavo ati azivikanwa kuti akafa kana kukuvadzwa.
Gunyana 04, 2017
Vanhu vekwaNhema Voshushikana neKushaya Motokari Dzinotakura Varwere
Vagari vari kumaruwa eShurugwi kwaNhema vanoti kushaikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa hutano hwavo panjodzi. Vagari ava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita seZvamabande neTongogara hazvina motokari dzinotakura varwere.
Nyamavhuvhu 28, 2017
Vatori veNhau Vokuridzirwa Kuva Neruzivo Nezve VaKaremara
Vatori venhau vemunyika vari vakurudzirwa kuti vave neruzivo rwakakwana pamusoro pemararamiro evakaremara, kuitira kuti vakwanise kunyora nyaya dzine hudzamu dzinobatsira kusandura maonerwo anoitwa vakaremara.
Nyamavhuvhu 23, 2017
Vamwe VaKwegura Vanoti Havasi Kupihwa Ruremekedzo Rwakakwana
Kupindana kwemazuva pamunhu agara pabasa kunouya nekutya mukati kune vakawanda pamusoro pekusada kutambira kugwegura.
Nyamavhuvhu 22, 2017
Amai Maud Muzenda, Mudzimai waVaSimon Muzenda Vanoshaya
Mudzimai wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaSimon Muzenda, Amai Maud Muzenda vanonzi vashaya nhasi. Amai Muzenda vainge vari mukoti uye vasiya vana vanomwe.
Nyamavhuvhu 21, 2017
Rimwe Sangano reveChidiki Rofamba Mudzimba Richikurudzira Vamwe Kuti Vaongororwe Ropa
Vechidiki vanorarama nehutachiona hweHIV/AIDS vachishanda nesangano rakazvimiririra reAfricaid Zvandiri vatanga chirongwa chekufamba mudzimba dzine vechidiki vachivakurudzira kuongororwa ropa.
Nyamavhuvhu 17, 2017
Vamwe Varume Votiza kuChecheudzwa kuChiredzi
Ishe Tshovani vanoti avo varikutiza mudunhu ravo vaenzi vavo vasinganzwisisi tsika dzevanhu vavo uye vanoona sekuti kuchecheudzwa kunoitwa pavanhu vavo ndekwevanhu vese vese vachiti hapana chekutya kana kutiza.
Nyamavhuvhu 14, 2017
VaMnangagwa Vorapwa kuSouth Africa Mushure Mekuendeswa kuZvipatara Zvakawanda muNyika
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa avo vanonzi vari kurwara nemudumbu vanonzi vakaendeswa nechimbi chimbi nendege kuchipatara chekuSouth Africa.
Nyamavhuvhu 11, 2017
Makudo Oita Madiro aJojina muMisha yeKariba
Vagari vemuKariba vanoti havachina mufaro sezvo vari kuoneswa chitsvuku nemakudo, ayo ari kurura zvekupinda mudzimba dzavo.
Nyamavhuvhu 09, 2017
Madzimai kuKariba Otambira neMufaro Chirongwa cheKuronga Mhuri
Madzimai akawanda muKariba anoti anogamuchira nemufaro chirongwa chekuronga mhuri pachishandiswa nzira dzakasiyanasiyana chiri kutungamirwa nesangano reZimbabwe Population Services, (PSI).
Nyamavhuvhu 07, 2017
NAC Yotsutsumwa neKurambidzwa kweMakondomu muMahotera
Vesangano reNational AIDS Council (NAC) vanoti vari kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera havachabvumidzwa kupa makondomu pachena kuvanhu vanopinda mumahotera avo senzira yekudzivirira kupararira kweHIV.